သင်၏ Android ကိုအခမဲ့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အရာအားလုံး !! | Androidsis
Francisco Ruiz | | Android application များ, NOTICIAS, Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
သင်တို့ထဲမှများစွာသောသူတို့သည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိရသနည်း ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး၌အကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုများ post ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminals များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အပလီကေးရှင်းများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏမွမ်းမံမည့်အထူးသီးသန့်ပို့စ်ကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Icon packs, Wallpapers, Launchers နှင့် customization applications များဖြစ်သည် ရက်အနည်းငယ်အဘို့ငါတို့သည်လုံးဝအခမဲ့အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်အခုသင်သိပြီ၊ အကယ်၍ သင်သည် Android ကိုချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ဆိုရင်သင်သိပြီ သင့်ဖုန်း၏အသွင်အပြင်ကိုညှိခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲပါဤကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အကန့်အသတ်ဖြင့်စုဆောင်းမည့်ဤထုတ်ဝေမှုကိုသင်လက်လွတ်။ မလွတ်သင့်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤစာမူကိုအနှစ်သက်ဆုံးတွင်သိမ်းဆည်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးပါသည်။ သင်နှစ်သက်သော web browser.
3 အခမဲ့ Android Launchers
4 Lock Screen ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန် Apps များ
5 Android ကီးဘုတ်
7 ကန့်သတ်အချိန်အခမဲ့ငွေပေးချေမှုအိုင်ကွန် Pack ကို
ဤအပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး၌နေ့စဉ်ထုတ်ဝေပြီးဤအပလီကေးရှင်းများဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းကိုတိုးမြှင့်သည်။ Paid app ကမ်းလှမ်းမှုများသည်ရက်အနည်းငယ်သာရရှိနိုင်သည် ထို့ကြောင့်သင် aluna ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသူတို့မရုပ်သိမ်းမီ၎င်းကို download လုပ်ပါ။
ဒီအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါဆိုလို ကျွန်ုပ်တို့အပတ်စဉ်ဤနေရာတွင်မျှဝေသောကမ်းလှမ်းမှုများသည်နာရီအနည်းငယ်မှခုနစ်ရက်အထိအခမဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးသောရက်စွဲရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ဒီမှာအကြံပြုထားတဲ့ icon pack ကိုသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန် download လုပ်ရန်အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင်ထပ်မံရှာဖွေတဲ့အခါကမ်းလှမ်းမှုသက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလျှောက်လွှာကိုမင်းဒေါင်းလုပ်ချပြီးတာနဲ့ငါပြောမယ်။ ဒါကဘဝအတွက်မင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သင် pack ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဂူဂဲလ်အကောင့်ဖြင့်မည်သည့် Android ကိရိယာကိုမဆို log in လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုမှတ်မိခြင်းအားဖြင့် Android application store ၌အခမဲ့ရနိုင်သည်။
ဤအရာကိုပြောဆိုပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာအောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အခမဲ့အပလီကေးရှင်းသည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသည် Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်။
3D နောက်ခံပုံများ - အခမဲ့နောက်ခံများ
နောက်ခံပုံအမှောင်၊ အမှောင်နောက်ခံ - အမှောင်ဖုံးခြင်း
အခမဲ့ Android Launchers
Android အတွက် Live Icon Launcher
Apex Launcher - ကိုယ်ပိုင်၊ ကာကွယ်၊ ထိရောက်မှု
Google Now ဖွင့
ရေးသားသူ: David Sn
ရေးသားသူ: Evie Labs က Inc က
BlackBerry Launcher ကို
ရေးသားသူ: BlackBerry ကိုလီမိတက်
စမတ် Launcher ကို 5
Lock Screen ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန် Apps များ
ရေးသားသူ: Simi စတူဒီယို
မင်္ဂလာပါ Locker Lock Screen
ရေးသားသူ: အဆိုပါ Lockdown အဖွဲ့
Fleksy: Emojis ဖြင့်အခမဲ့ကီးဘုတ်အကြောင်းအရာ
ရေးသားသူ: Raimondas rimkus
ရေးသားသူ: Loopsie SRL
ရေးသားသူ: MACHAPP Software များ, Ltd
KWGT Kustom ဝစ်ဂျက်ပြုလုပ်သူ
ရေးသားသူ: Kustom Industries,
ကန့်သတ်အချိန်အခမဲ့ငွေပေးချေမှုအိုင်ကွန် Pack ကို
ဗိုင်းရပ်စ် Icon Pack ကို
ရေးသားသူ: DrumDestroyer အကြောင်းအရာများ
Pixel pie icon pack - အခမဲ့ pixel icon pack
ရေးသားသူ: iEvil Dev
O3 အခမဲ့ Icon Pack
UX Led - Icon Pack အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်
ရေးသားသူ: SLJ ဒီဇိုင်းများ
ရေးသားသူ: Patryk Goworowski
Nbg အခမဲ့ရောင်စုံ Icon Pack
ရေးသားသူ: ရော်နယ်အောင်နိုင် Dwk
ပွဲတော်အခမဲ့အိုင်ကွန် Pack ကို
Kaorin အိုင်ကွန် pack ကို
Exicon - အိုင်ကွန်အထုပ်
ရေးသားသူ: A1 ဒီဇိုင်း
Brazil Icon Pack (ကမ်းလှမ်းချက်)
ဤသည်မှာယခုရေးသားချက်မှစပြီးနေ့စဉ်လက်တွေ့ကျကျအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Androids ၏စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောက်လွှာများအားလုံးကိုထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည် နှင့် notification bar အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အညွှန်းဘား၊ သတိပေးစနစ်စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သိသည် အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်နေ့စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန်သင်၏အကြိုက်ဆုံး၌ဤ post ကိုသိမ်းဆည်းပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android ကိုအခမဲ့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အရာအားလုံး !!
Roberto Tellez Ibarra ဟုသူကပြောသည်
Roberto Tellez Ibarra ကိုစာပြန်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပထမတန်းစား။
launchers အမျိုးအစားတွင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် TOTAL LAUNCHER ကိုထည့်သွင်းသင့်သည် (အစတွင်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးလာသည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုကောင်းစွာရှင်းပြထားသောသင်ခန်းစာများစွာရှိသည်။ ) ၎င်းတွင်ဗားရှင်း ၂ ခုရှိသည် (အခမဲ့နှင့်အခကြေးငွေရသည်။ ), အခမဲ့ဗားရှင်းသည်သင်ထုတ်ဝေသောအရာများထက်များစွာသောအရာများစွာကိုပေးထားသည် (မိုက်ကရိုဆော့ဖ် မှလွဲ၍၊ သို့သော်၎င်းနှင့်မတူသည်မှာ RAM သုံးစွဲမှုသည် ၃ ဆနိမ့်သည်)၊ ၎င်းကိုသင်ပုံတူဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ရှုခင်းရှုခင်းအနေအထားဖြင့်ပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည် ၎င်းတွင်နံပါတ်အရေအတွက်ရှိသည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုအလွန်အမင်းအကြံပြုသည်, အခမဲ့ဗားရှင်းအတွက်ကြော်ငြာများမပါရှိကြောင်းလည်း
Paco ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးရှိသည်။
ဟယ်လို။ Walli ကိုဒေါင်းလုပ်ချသော်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ။
Orlando sarmiento ဟုသူကပြောသည်
Pixel Ring Icon Pack သည်အခမဲ့ဖြစ်သည် Paco မဟုတ်ပါ။ Play Store ကဒေါ်လာ ၀.၉၉ ကျသင့်တယ်။ အဘယ်အရာကိုကမ်းလှမ်းမှုအခမဲ့အဖြစ်ပုံပေါ်ကြောင်း? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Orlando Sarmiento အားစာပြန်ပါ
ဖခင်များနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဈေးနှုန်းဖြင့်ဖခင်များနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အမျိုးအစားများနှင့်မော်ဒယ်များ !!
Samsung Galaxy M21 ကိုမတ်လ ၁၆ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်